ခရိုအေးရှားနဲ့ ပွဲမှာ ပရိသတ်တွေ စိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့ ပစ်ဖိုဒ့် ရဲ့ ရေဗူး | Football Myanmar
ခရိုအေးရှားနဲ့ ပွဲမှာ ပရိသတ်တွေ စိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့ ပစ်ဖိုဒ့် ရဲ့ ရေဗူး
November 19, 2018 Adam Willian	11 Comments
အင်္ဂလန် အသင်း ဟာ ယမန် နေ့ ညက ဥရော ပ နေးရှင်း လိဂ် အုပ်စု နောက် ဆုံး ပွဲစဉ် အဖြစ် ခရို အေးရှား အသင်း ကို အိမ် ကွင်း မှာ လက်ခံ ကစား ခဲ့ ပါတယ် ။ အင်္ဂလန် အသင်း ဟာ ခရို အေး ရှား ရဲ့ ၅၇ မိနစ် မှာ သွင်း ယူ ခဲ့တဲ့ ဂိုး ကြောင့် နောက် က လိုက် ကစား ခဲ့ရ ပေမယ့် ခြေပ ဂိုး နဲ့ အနိုင် ဂိုး တွေ ပြန်လည် သွင်း ယူ နိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါကြောင့် အင်္ဂလန် အသင်း ဟာ အုပ်စု ပွဲစဉ် တွေ ပြီး ဆုံး ချိန် မှာ ရမှတ် ၇ မှတ် နဲ့ အုပ်စု ပထမ နေရာ ကနေ ပြိုင် ပွဲ ရဲ့ နောက် ဆုံး အဆင့် ( ဆီ မီး ဖိုင် နယ် ) ကို တက် ရောက် သွားခဲ့ ပြီ ဖြစ် ပါတယ် ။ ယခု ပွဲ ရဲ့ ရလဒ် ဟာ အင်္ဂလန် နဲ့ ခရိုအေး ရှား တို့အတွက် ကြီးမား တဲ့ ခြားနား မှု ကို ဖြစ် စေ မှာ ဖြစ် တာ ကြောင့် ၂ သင်း စလုံး အမှား အယွင်း မရှိ အောင် အထူး သတိ ပြု ကစား သွားခဲ့ ကြပါတယ် ။
ဒီလို ကစား ကြ ရာ မှာ တော့ အင်္ဂလန် ဂိုး သမား ဂျော် ဒန် ပစ် ဖိုဒ့် ရဲ့ ပြင် ဆင် မှု တစ်ခု ဟာ ပရိသတ် တွေ ကို စိတ် ၀င် စား နှစ် သက် စေခဲ့ ပါတယ် ။ ပစ် ဖိုဒ့် ဟာ သူ သောက် သုံး တဲ့ ရေဗူး မှာ ခရိုအေး ရှား ကစား သမား တွေ ရဲ့ ပင်နယ်တီ ကန် သွင်း ပုံ တွေ ကို ရေးမှတ် ထားခဲ့ တာ ကို မြင်တွေ့ ခဲ့ ရ ပါတယ် ။
အကယ်၍ ပွဲ ချိန် အတွင်း ပင်နယ်တီ ပေး ခဲ့ ရ ပါက ကန် သွင်းမယ့် ကစား သမား အပေါ် မူတည် ပြီး ကာကွယ် ရမယ့် ဘက် ကို ရေးမှတ် ထား တဲ့ ရေဗူး ကို ပစ်ဖိုဒ့် ယူဆောင် လာခဲ့ တာ ဖြစ် ပါတယ် ။ ပစ်ဖိုဒ့် အတွက် တော့ ဒီလို ပြင်ဆင် မှု ဟာ ပထမ ဆုံး အကြိမ် မဟုတ် ခဲ့ ပါဘူး ။
ခရိုအေးရှား နဲ့ မကစား မီ အမေ ရိကန် အသင်း နဲ့ ခြေစမ်း ပွဲ မှာ လည်း ပစ်ဖိုဒ့် ဟာ ရေဗူး မှာ အခုလို မျိုး ရေးမှတ် မှု ပြုလုပ် ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါ့ အပြင် ပစ်ဖိုဒ့် ဟာ အင်္ဂလန် အသင်း ရဲ့ နံပါတ် ၁ အဖြစ် နဲ့ ကမ္ဘာ့ ဖလား ပြိုင်ပွဲ ကို ပါဝင် ခဲ့ ပြီး ကိုလံ ဘီယာ အသင်း နဲ့ ပင်နယ်တီ အဆုံး အဖြတ် ယှဉ် ပြိုင် ချိန် မှာ လည်း ရေဗူး မှာ ရေးမှတ် ထား တဲ့ အချက် အလက် တွေ က အကူ အညီ ပေးခဲ့ တယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။
ပစ် ဖိုဒ့် ရဲ့ ပြောဆို ချက် အရ ကိုလံ ဘီယာ ပင်နယ်တီ ကန်သူ တွေ အနက် ဖယ်ကာအို တစ်ဦး သာ သူ တွေးထင် ထားတဲ့ ဘက် နဲ့ ဆန့်ကျင် ပြီး ကန်သွင်း ခဲ့ ကြောင်း နဲ့ ပစ်ဖိုဒ့် ကာကွယ် နိုင် ခဲ့တဲ့ ကားလိုစ့် ဘက်ကာ ရဲ့ ပင်နယ်တီ ဟာ သူ လေ့လာ မှတ်သား ထားခဲ့ တဲ့ အထဲ က ဘက် ကို အတိ အကျ ကန် သွင်း ခဲ့ တာ ဖြစ် တယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။
ဂျော်ဒန် ပစ်ဖိုဒ့် ဟာ အရပ် အမောင်း မမြင့် မား ပေမယ့် ပင်နယ်တီ ကာကွယ် ရာမှာ တော့ ကောင်းမွန် သူ တစ်ဦး ဖြစ် ပါတယ် ။ အဲဗာတန် အသင်း ဂိုး သမားလေး ဟာ ယခု ရာသီ မှာ ပင်နယ်တီ ၃ လုံး ကို ကာကွယ် ထားနိုင် ခဲ့ပြီး အင်္ဂလန် လက် ရွေး စင် အသင်း အတွက် လည်း အားထား ရ သူ တစ်ဦး အဖြစ် ရှိ နေ ပေးခဲ့ ပါတယ် ။
Previous Post3 ပတ်ကျော် အနားယူရတော့မယ့် ရာကီတစ် နဲ့ နံနက်ခင်း သတင်းတိုများNext Postဘာစီလိုနာကို ငြင်းပယ်ခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဝန်ခံမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ပြင်သစ်ကြယ်ပွင့် အန်တိုနီဂရစ်ဇ်မန်း
11 thoughts on “ခရိုအေးရှားနဲ့ ပွဲမှာ ပရိသတ်တွေ စိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့ ပစ်ဖိုဒ့် ရဲ့ ရေဗူး”
✅ POF FREE DATING APP ☞ http://sexinyourcity.ml ♡^_^♡
I’m sure it’s leaking on you, Mrs.
edwardhpnk.x.fc2.com The breathtakingly gorgeous working girls are tested weekly for all sexually transmitted diseases in accordance with Nevada law.
Do you mind if I quoteacouple of your posts as long as I provide credit and sources back to your website? My website is in the exact same area of interest as yours and my visitors would definitely benefit from some of the information you provide here. Please let me know if this alright with you. Appreciate it!
I do not even know how I finished up right here, but I assumed this publish used to be great. I do not know who you are however certainly you’re going toawell-known blogger if you happen to are not already. Cheers!
It could possibly be enjoyment and rewarding to expend the working day along together with your associate performing to getavery good result in. They too will be, and sometimes are, particular about who they need to date. It is essentially of poor high quality withamost thickness of about5toes (1. Even if every part you might be portraying isalie, as long as your ex hears that you’ve got moved on with your life, he/she may hunt down the explanation on your happiness hur